20 June- Maalinta caalamiga ee Qaxootiga | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / 20 June- Maalinta caalamiga ee Qaxootiga
20 June- Maalinta caalamiga ee Qaxootiga
Posted by: Mahad Mohamed June 20, 2020
Himilo – Duni rabshaduhu ay kumaankun qoysas ah ku qasbaan inay barakacaan maalin walba, hadda waa waqtigii la tusi lahaa sida loo garab istaagi karo.
Si tan loo hir-geliyo, hey’adda QM u qaabilsan qaxootiga ayaa billowday ol’ole dowladaha loogu yeerayo inay dadaalkooda ku daraan wax u qabashada qaxootiyada.
Maalinta caalamiga ee Qaxootiga, oo la qabto 20-June sannad walba, waxaa la iskugu yeeraa xoojinta, dhiirri-gelinta iyo kaalmaynta malaayiinta qaxooti ee dunida ku baahsan.
Sannadkan, waxay maalintan astaysay fure muhiim ah oo dadweynuhu taageero ugu muujiyaan qoysaska qaxootiga ah. Qarnigan waa kii ugu xummaa ee qaxootiga adduunka soo mara. In ka badan 80 milyan oo qof ayaa ka barakacay dhulkoodii sannadkii 2019-ka.
30% qaxootiga adduunka waxay kasoo haajireen dagaallo, rabshado iyo cadaadiska lagu hayo. Dhibanaha ugu tiro badan ee ku jira waa carruurta. In ka badan kala bar qaxootigu waxay ka hooseeyaan da’da 18-jirka.
Dagaalku waa sababta ugu weyn. Kala bar qaxootiga waxay ka yimaadeen dalalka ay dagaalladu la dageen ee Siiriya iyo Afghanistan.
Qaar kale ayaa kasoo cararay macluul iyo rabshado lagu hayay. Muslimiinta Burma oo ku dhaw laba Milyan ayaa qalalaasaha ay ku wadaan Buudiska ka tirada badan waxay ku qaaday inay ku barakacaan meel Alle meesha ay badbaado ku heli karaan.
Qaar kale ayaa safar adag usoo gala tiigsiga meel ka nolol fiican dhulkooda. Waxayna taasi gelisaa halis hor leh oo ay ku dhiman karaan.
Previous: Arteta oo doonaya in David Luiz uu sii joogo Arsenal
Next: Daraasad: Waalidiinta carruurta 2037 ayaa noqonaya kuwa iska bartay Internet-ka